ကွတ်ကျွန်းစု LLC - ကွတ်ကျွန်းစုလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ
ကွတ်ကျွန်းများလီမိတက်တာ ၀ န်ယူမှုကုမ္ပဏီ (LLC) ၏စည်းမျဉ်းများကပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်ရေးအစိတ်အပိုင်းကိုသူတို့ကဲ့သို့ခိုင်မာစွာမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ကွတ်ခ်ကျွန်းစုများသည်သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ဘဏ္predာရေးသားကောင်များထံမှသို့မဟုတ်ဥပဒေရေးရာအရေးယူမှုများမှကာကွယ်ရန်အတွက်ရရှိနိုင်သောအခိုင်မာဆုံးဥပဒေပြဌာန်းချက်အချို့ကိုပေးသည်။ အဆိုပါ domicile ရုံသူတို့ရဲ့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအစုစု, ကွတ်ကျွန်းစု LLC တွင်လာမည့်အဆင့်ကိုမိတ်ဆက်ပေးသည်။
မြောက်မြားစွာ features တွေကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားတွေ့ရှိရမရနိုငျသောကွတ်ကျွန်းစု LLC ဥပဒေများထဲသို့သွင်းထားခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်နှင့်အတူတစ်ကွတ်ကျွန်းစု LLC မဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နေဆဲအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်တစ်ဦး lien မရှိ, အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်မိမိတို့၏အခွင့်အရေးများပြုမူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းနိုင်ပါတယ်
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆိုထဲကရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု အထုံးအဖွဲ့တို့ကို
ကွတ်ကျွန်းစု LLC ဥပဒေရေးရာအစီရင်ခံစာ
LLC ဥပဒေပြဌာန်းမကြာသေးမီကကွတ်ကျွန်းစုများတွင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုအင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ 2008 ( "ယင်းအက်ဥပဒေ") ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်အရေအတွက်မွေးစားပုံစံအောက်ပါအတိုင်း။ ဒါဟာပြည်တွင်းအမေရိကန် LLC အထုံးအဖွဲ့တို့ကို အသုံးပြု. အမေရိကန်ရှေ့နေများမှစိုးရိမ်ပူပန်မှုအများအပြား key ကိုကိစ္စရပ်များတွင်ပြဌာန်းသည်ဧကန်အမှန်ဖြစ်ပေးစေခြင်းငှါ, သို့သော်, နောက်ထပ်တတ်၏။ အဆိုပါအက်ဥပဒေကိုလည်းကွတ်ကျွန်းစု၌ဤစက်မှုလုပ်ငန်း၏အရေးပါမှုနှင့်ကိုက်ညီအများအပြားထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကာကွယ်မှု features တွေမိတ်ဆက်
အဆိုပါအက်ဥပဒေ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများအရသိရသည်တစ်ခု LLC တညျဆောကျပုံထက်သူတို့ကိုပညတ်တော်အားဖြင့်နှုတ်တိုက်ချပေးခဲ့တာရှိသည်ဖို့ကျယ်ပြန့်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်း operating သဘောတူညီချက်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့အရာကိုပြုသင့်သည်အတိုင်းယင်း၏စီးပွားရေး၏အကငျြ့ဘို့မဆိုပါပြဋ္ဌာန်းချက်များပါဝင်နိုင်သည်။ (၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်း) အချို့သောပြဋ္ဌာန်းချက်များမဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။
အများဆုံး LLC တရားစီရင်မှုကဲ့သို့ပင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏တစ်ဦးမြီရှင်တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်နေတဲ့အားသွင်းနိုင်ရန်လျှောက်ထားရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ အဆိုပါအက်ဥပဒေကိုအခြားကုစား၏ရရှိမှု, ထိုအားသွင်းနိုင်ရန်၏သဘောသဘာဝနှင့်အတိုင်းအတာနှင့်အဖွဲ့ဝင်အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်ကြွေးရှင်၏အခွင့်အရေးကိုအထဲက setting နောက်ထပ်သို့သော်တစ်ဦးခြေလှမ်းတတ်၏။ Nevis နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်Cook ကျွန်းများတွင်အလားတူတရားဝင်နှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်များရှိသည်။
ယင်းအက်ဥပဒေကို S 45 စမှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကြွေးရှင်သည်အဘယ်သူ၏တရားသဖြင့်စီရင်သည့်ကွတ်ကျွန်းစုများ၏တရားရုံးချုပ်ကအသိအမှတ်ပြုများနှင့်တစ်ဦး intestacy မှပေါ်ပေါက်ခြင်းရှိမရှိအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏အထွေထွေတာဝန်ကျတဲ့နေရာရှိသည်ဖို့မလုပ်ပဲဒေဝါလီသို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်သူကိုမဆိုလူတစ်ဦးလည်းပါဝင်သည်ဖြစ်ပါတယ်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
S က 45 (6) တစ်ဦး LLC အတွက်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်နေတဲ့ကြွေးရှင်များအတွက်တစ်ခုတည်းသောကိုးကွယ်ရာ, တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်လျှောက်ထားပိုင်ခွင့်ကြောင်းကိုတိကျတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားအတရားစီရင်မှုတွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခု assignee ၏, တစ် lienholder ၏အပိုင်ထဲမှာပေါင်၏သူတို့အားအလားတူအခွင့်အရေး, ထည့်သွင်းရန်, (တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်၏အတိအကျသဘာဝတရား၏လုံလောက်သောချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်များ၏မရှိခြင်းအတွက်) တရားရုံးများအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတစ် LLC ကကမ်းလှမ်းကာကွယ်မှုအတိုင်းအတာအဖြစ်မရေရာဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကွတ်ကျွန်းစုများတွင်မဆိုမရေရာအောက်ပါအတိုင်းထောက်ပံ့အပိုင်း7၏ subclauses (8) & (45) အပါအဝင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြဌာန်းချက်အားဖြင့်ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး:
သံသယများရှောင်ရှားခြင်းအဘို့နှင့်ပုဒ်မခွဲ (6) ၏အထွေထွေကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ:
တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီအတွက်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့အကျိုးစီးပွားအပေါ်တစ်ဦး lien ဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်မဟုတ်ကြလိမ့်မည်
တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်ဤအပိုင်းကိုအညီထုတ်ပေးနေသည်အဘယ်သူ၏မျက်နှာသာအတွက်မြီရှင်အားဖြင့်မဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားတစ်ခု assignee သို့မဟုတ် သိ. ဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာရမည်မဟုတ်, မကြောင့်ကြွေးရှင်ကိုကိုင်ရကြမည်သို့မဟုတ်ထိုအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်အခွင့်အရေးများကိုလေ့ကျင့်ခွင့်ရှိသည်ကြလိမ့်မည်
မည်သည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟာအားသွင်းနိုင်ရန်ထုတ်ပေးမခံခဲ့ရလျှင်အဖြစ်အားလုံးအရိုအသေအတွက်ထိုအခွင့်အရေးများနှင့် ပတ်သက်. အပေါင်းတို့သည်သူ၏အဖွဲ့ဝင်အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရားလေ့ကျင့်ခန်းအားဆက်လက်ရကြလိမ့်မည်တစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်မဆိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားဘာသာရပ်ကိုင်ပြီး;
ပုဒ်မခွဲ (6) ကိုကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်မျိုးစုံ members.For သံသယများရှောင်ရှားခြင်းရှိပြီးပုဒ်မခွဲ (6) နှင့်ပုဒ်မခွဲ (7) ၏အထွေထွေကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, အဘယ်သူ၏မျက်နှာသာတစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိမရှိလျှောက်ထားရမည် : ထုတ်ပေးခွင့်မရှိသောရကြလိမ့်မည်
စံပြ, pecuniary နှင့်တိုး။ လေးစေသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသည့်ကွတ်ကျွန်းစုအသိအမှတ်မပြုနှင့်အညီတစ်ဦးအားသွင်းနိုင်ရန်အောက်တွင်ဆယ်ယူခံရဖို့မတတျနိုငျဖြစ်ကြ၏။
S က 45 (5)
တရားရုံးကိုမထီမဲ့မြင်မပြုနှင့်ထုတ်ပယ်စံပြ, ငွိုးထားတဲ့, retributory သို့မဟုတ် (ဘာပဲနာမတော်အားဖြင့်) ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုချီးမြှင့်ပါဝငျရာကိုမဆိုပမာဏ, သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်လိမ့်မည်အားသွင်းနိုင်ရန်, ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်သောပေါင်းလဒ်အကဲဖြတ်နှင့်ပြန်ဆယ်တင်လို့ရတဲ့အညီ၏ရည်ရွယ်ချက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပမာဏ, နှစ်ဆ trebling သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အရှုံးသို့မဟုတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်လျော်ကြေးအဖြစ်အကဲဖြတ်တစ်ဦးပေါင်းလဒ်ပွားခြင်းဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ""
အဘယ်အရာအားသွင်းနိုင်ရန်ဘို့ပေးပါဘူး, ဒါပေမယ့်အားသွင်းနိုင်ရန်အဘို့, အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏လက်၌လက်ခံတွေ့ဆုံသည်ပွီလို့မြို့တော်သို့မဟုတ်ဝင်ငွေဖြန့်ဝေခံယူဖို့ကြွေးရှင်အဘို့ဖြစ်၏။ ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကိုယင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အညီမြို့တော်များအတွက်အဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ဖုန်းခေါ်စေသည်လျှင်, ကုမ္ပဏီအားသွင်းနိုင်ရန်သျောလညျးကြောင်းမြို့တော်အလှူငွေတွေ့ဆုံရန်ကြောင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးဖြန့်ဖြူးသုံးနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာညီမျှခြင်း၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအခြမ်းထက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာထိုင်လျက်ရှိသည့်အားသွင်းနိုင်ရန်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အဆိုပါကြွေးရှင်သည်မိမိအပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမပြောဆိုချက်ကိုရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အဆိုပါဖြန့်ဖြူးသည့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရောက်ရှိဘူး။
ကြားဖြတ်အားသွင်းနိုင်ရန်ဟောင်း Part လျှောက်ထားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သာ 30 ရက်ပေါင်းဦးရေအများဆုံးတစ်ဦးဘဝကိုရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလျှောက်ထားသည့်တရားခံကတော့တရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်နှင့်အပြည့်အဝအားသွင်းနိုင်ရန်ကိစ္စကိုဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှင်လျင်မြန်စွာလျှောက်လွှာနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမယ်သေချာစေရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်ကြိမ်ခွင့်ပြုမယ့်အားသွင်းနိုင်ရန်, ငါးနှစ်ကောင်းမွန်သည်။
အရေးပါမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့် interlocutory applications များနှင့် ပတ်သက်. သီးခြားဥပဒေရေးရာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ခြင်း LLC သည်အားပေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဆန့်ကျင်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားရရှိထားသူရသော LLC သည်ဆန့်ကျင်ထုတ်ပေးလျက်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအမိန့်သို့မဟုတ်တရားရုံးမိန့်ကိုထောကျပံ့ဖို့လုံလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ကြွေးရှင်ကျေနပ်ဖို့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အကျိုးစီးပွားရရှိမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေးထားသောနိုင်ငံခြားရေးစီရငျခကျြ, (ကွတ်ကျွန်းစုများဥပဒေနှင့်အကိုက်ညီမဟုတ်လျှင်), အသိအမှတ်ပြုမရနိုငျသို့မဟုတ်တစ်ကွတ်သည်တရားရုံးတွင်ပြဌာန်း။
LLCs ၎င်းတို့၏အဖွဲ့ဝင်များကဒီစစ်အစိုးရမှအကျိုးနှင့်ဤပြဌာန်းချက်ဟာ operating သဘောတူညီချက်မှဘာသာရပ်လျှောက်ထားရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါ။ ဤသည်မှာအဘယ်သူ၏အဖွဲ့ဝင်အန္တရာယ်မှာမိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားထားရန်သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အကျိုးစီးပွားပေါင်မှပျော်ရွှင်နေကြသည် LLCs ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ သို့သျောလညျးအဘယျသို့သူတို့မပွုနိုငျနောက်ပိုင်းတွင်၎င်းတို့၏စိတ်ထဲတွင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအပြောင်းလဲမရနိုငျသောက Operating သဘောတူညီချက်အတွက်တဦးတည်းပြဋ္ဌာန်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပုဒ်မ၏သက်ဆိုင်မှုထိခိုက်လည်ပတ်မှုသဘောတူညီချက်၏စည်းကမ်းချက်များမှမဆိုအတင်းအဓမ္မပြင်ဆင်ချက်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
LLCs ဥပဒေအောက်ရှိကွတ်ကျွန်းစုများတွင်မှတ်ပုံတင်ရှာကွပါသည်အခြားတရားစီရင်မှုကနေအခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် LLCs ဖို့ကွတ်ကျွန်းစုမှမိမိတို့အတည်တကျနေထိုင်ရာမြို့ရွာလွှဲပြောင်းပေမည်။ သို့သော်လက်ရှိကော်ပိုရိတ်အကြွေးတွေမှလွတ်မြောက်ရန်လိုသော LLCs အဆိုပါတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကောင်းသောအမှုကိုပြုလိမ့်မည်။ အဆိုပါအက်ဥပဒေအထူးကွတ်ကျွန်းစုများအတွက် LLC ဆန့်ကျင်အတည်ပြုရကြလိမ့်မည် redomiciliation အတူ LLC ကယင်း၏ကြိုတင်အကြွေးတွေယူပြီးကုမ္ပဏီဆန့်ကျင်မည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှု, ပြီးသားတင်သွင်းသို့မဟုတ်မဖြစ်စေ, redomiciliation မှကြိုတင်, ဆက်လက်နှင့်မည်သည့်တရားသဖြင့်စီရင်ထဲသို့ဝင်စေခြင်းငှါပေးပါသည်။
ပုံမှန်လျှို့ဝှက်ပြဋ္ဌာန်းချက်သက်ဆိုင်ပါသည်။ တရားစွဲဆိုမှုကင်မရာထဲမှာကြားသိကြသည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်သာကန့်သတ်ခွအေနမြေားအတွက် divulged နိုင်ပါသည်။
အသစ်ဥပဒေပြဌာန်း LLCs ၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ပြည့်စုံပေမယ့်ခက်ခဲသည့်ကိစ္စမဟုတ်မူဘောင်ပေးပါသည်။ ဒါဟာ LLCs သည့်ကွတ်ကျွန်းစုများတွင်ယုံကြည်မှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် တွဲဖက်. ရှေ့နေများနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကြံပေးတစ်ဦးအသုံးဝင်သောထို့အပြင်ပေးသွားမှာပါဟုယုံကြည်နေသည်။